“Angisona isigqila samuntu” kusho uBonang | Scrolla Izindaba
“Angisona isigqila noma inkomo yemali. Ngizozivikela noma yinini lapho abantu abanonya bezama ukusebenzisa umkhiqizo wami ezinhlosweni zabo zobugovu,” kusho uBonang.
“Isizini elandelayo ka-Being Bonang ngeke isakazwe kuze kufike labo abangikweletayo bangikhokhele.’’ Lokhu kulandela impi ebiphakathi kaBonang noMphathi woMkhiqizo wakhe, uLegend Manqele.
Lesi sihlabani sikamabonakude phambilini sichaze ukusebenza ku-Season 3 wohlelo lwaso njengesipiliyoni esibi kakhulu empilweni yaso yokusebenza.
Ngesonto eledlule, uManqele uthe lolu hlelo lumisiwe ngenxa yokungasebenzi kahle, kodwa engxoxweni ekhethekile abe nayo ne-Scrolla.Africa, uBonang ukuphikile lokho.
“Kuze kube namuhlanje, izinombolo zabantu ababuka uhlelo lwami ziphezulu okudlula zonke izinhlelo zempilo yabantu ezweni. Ngakho-ke, lowo mbhedo wokuthi uhlelo lwami lukhishwe kumabonakude ngenxa yezinombolo ezingezinhle, awulutho ngaphandle kokukhombisa ukuthi abantu banezinhliziyo ezimbi kangakanani,” kusho yena. Imenenja kaBonang, uDawn Phillips naye akahambisani nhlobo nokushiwo nguManqele.
UBonang uthe iqiniso linendlela yokuphuma kanti umlando uzohlulela labo abazama ukusebenzisa uhlobo lomkhiqizo wakhe kanzima.
Ebuzwa ukuthi ngabe uyoke acabange yini ukuphinda ashuthe uhlelo lwakhe i-Being Bonang ngesisekelo sokuthi noma ngubani omkweleta imali uyamkhokhela, uQueen B wenqabile ukuphendula.